BUDDHIST TERMS' Dictionary: SOCIAL ASSISTANCE - သင်္ဂဟ၀တ္ထု
SOCIAL ASSISTANCE - သင်္ဂဟ၀တ္ထု
SOCIAL ASSISTANCE Saṅgahavatthu
သင်္ဂဟ၀တ္ထု - သင်္ဂဟတရားလေးပါး၊ ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရေးတရား။
မိဘနှင့်သားသမီး၊ ဆရာနှင့်တပည့်၊ မိတ်ဆွေအသင်းအပင်း၊ လူသားအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြရာ၌ အောက်ပါ သင်္ဂဟတရားလေးပါးသည် အလွန်လိုအပ်၏။ စည်းရုံးညီညွတ်မှု၊ ချစ်ခင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖြစ်စေ၏။
သင်္ဂဟတရားလေးပါးကား အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
(၁) ဒါန - ထောက်ပံ့ပေးကမ်းမှု။
လူအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၌ ထောက်ပံ့ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် ချီးမြှောက်ထိုက်သူကို ထောက်ပံ့ပေးကမ်းမှုဖြင့်သာ ပေါင်းသင်းရမည်။
(၂) ပေယျဝစ္စ - ချစ်မြတ်နိုးဖွယ်ရာ ချိုသာစွာ စကားဆိုမှု။
ပေးကမ်းမှုကို အလိုမရှိ၊ ချစ်မြတ်နိုးဖွယ်ရာ ချိုချိုသာသာ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုကိုသာ အလိုရှိသောသူအား ချိုချိုသာသာ ပြောဆိုမှုဖြင့်သာ ပေါင်းသင်းရမည်။
(၃) အတ္ထစရိယာ - ကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းကို သွန်သင်ညွှန်ပြပေးမှု။
ပေးကမ်းမှု စသည်ကို အလိုမရှိ၊ မိမိဘ၀၏ ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကို လိုလားသောသူအား ကြီးပွားတိုးတက်ကြောင်းကို သွန်သင်ညွှန်ပြပေးမှုဖြင့်သာ ပေါင်းသင်းရမည်။
(၄) သမာနတ္တတာ - နေထိုင်စားသောက်ရေး၌ မိမိနှင့် ထပ်တူပြုမှု။
ပေးကမ်းမှု စသည်ကို အလိုမရှိ၊ နေထိုင်စားသောက်ရေး၌ ခွဲခြားမှုမပြုဘဲ မိမိနှင့်တန်းတူ ပြုမှုကိုသာ အလိုရှိသူအား မိမိနှင့် ထပ်တူပြုမှုဖြင့်သာ ပေါင်းသင်းရမည်။
In relations between parents and children, between teacher and pupils, between friends and in human society, four kinds of assistance are essential for achieving unity, goodwill and peace.
The four kinds of assistance are :-
(1) Dana – giving material assistance
In associating with people, one should give material assistance in from of cash and kind to those who need them.
(2) Peyyavacca – saying pleasing and endearing words.
In associating with those who do not need material assistance but wish to be treated well, one should speak pleasing and endearing words to them.
(3) Atthᾱcariya – giving good counsel.
In associating with those who do not need material assistance but wish to have good counsel, one should give them good counsel towards achieving prosperity and progress.
(4) Samᾱnattata – to treat other as one’s equal.
In associating with those who do not need material assistance but wish to be treated as an equal, one should treat them as an equal in all dealings.